Merry Madagascar en video
2009-11-26 @ 21:06 in Sarimihetsika
Ny tena mahaliana ahy amin'ity Video ity dia ilay Kilalaka nandritra ny segondra vitsivitsy. Nandihy kilalaka i Dadabenoely :-)
Miala any Riffeur sy ny fandaharana Rock Metal ma-ve-sa-tra
2009-11-24 @ 15:29 in Politika
Manomboka amin'ny alakamisy izao dia hiverina indray ny fandaharana Rock Metal ao amin'ny RadioVazoGasy.com. Isaky ny alakamisy amin'ny 8 ora sy sasany alina (Ora Paris) dia hanainga antsika amin'ny mavesatra indray Riffeur izay efa nanao izany teto amin'ny RadioVazoGasy hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay.
Amin'ity indray mitoraka ity dia mbola tsy be teny i leiry fa amin'ny fandaharana ho avy dia hisy toy ny mahazatra ny fampahafantarana ny tontolon'ny Rock Mavesatra, ny vaovao momba ny hira sy ny mpihira.
Dia ao indray izany mihaona e.
2009-11-23 @ 15:41 in Serasera.org
Eo am-pampidirana tsikelikely ny Eritreritra mandalo ao amin'ny namana.serasera.org aho amin'izao. Efa nandeha nanomboka omaly izany. Ny Eritreritra mandalo dia toerana hampidiranao izay zavatra tianao hozaraina amin'ny olona fotsiny tsotra izao.
Raha efa nampiasa valam-piarahamonina hafa ianao (myspace, facebook, orkut, hi5, buddypress) dia io no ilay antsoindry zareo hoe "status", na "fil d'idées", na "wall" na "wire"... Dia nisalasala aho hoe inona no hiantsoana azy eto amin'ny serasera? Saika natao hoe "Indraim-bava" fa tsy dia niraikitra loatra na dia fohy aza. Koa dia eritreritra mandalo no hita fa mety.
Azo zaraina daholo izay mandalo fa aza ratsy eritreritra fotsiny.
Inona no idiran'i Kotity amin'izany?
2009-11-18 @ 04:46 in Politika
Efa henonareo ve io fomba fiteny io? "Inona no idiran'i Kotity amin'izany?" Matetika rehefa miresaka miaraka iny dia misy mitsatsaingoka tampoka hoe "Inona no idiran'i kotity amin'izany?"... tsy nisy resaka Kotity mihitsy teo ary tsy misy idiran'ilay fanontaniana akory. Ny niandohany angamba dia satria angamba mafy loatra tamin'ny olona ny nataon'i Kotity ka dia nafatratra tany amin'i Kotity daholo ny zava-nitranga rehetra teo amin'ny fiainany. Na dia ny akoho matin'ny barika aza dia i Kotity no omena tsiny. Taty aoriana moa dia navoakan'i Andry Rajoelina avy any Tsiafahy i Kotity satria resy lahatra izy fa tsy namono olona izany ilay rangaha io fa gadra politika fotsiny. (tohiny)